Ndeipi nguva panogona kuva nekunonoka kutaura muvana? | Bezzia
Ndeipi nguva panogona kuva nekunonoka kutaura muvana?
Maria Jose Roldan | 04/06/2022 13:28 | Vacheche
Imwe yenguva dzinonyanya kutarisirwa kuvabereki inguva iyo mwana anokwanisa kutaura mashoko ake okutanga. Zvisinei, mwana mumwe nomumwe akasiyana uye pachava nevamwe vanonyanya kukoshesa pakutaura uye vamwe vane nguva yakaoma. Kuenzanisa ndeimwe yezvikanganiso zvikuru zvinoitwa nevabereki, kunyanya kana zvasvika pakukura kwemutauro.
Usanetseka zvachose panyaya yekutaura uye iva nemoyo murefu kusvikira nguva yakadaro yasvika. Munyaya inotevera tinokuudza apo mwana anotanga kutaura uye inguvai pangave nekunonoka kutaura.
1 Mwana wese akasiyana
2 Panguva ipi panogona kuva nekunonoka kwemutauro?
3 Nzira yekubatsira mwana mukukura kwemutauro
Mwana wese akasiyana
Kana zvasvika pakukura kwemutauro, zvinofanirwa kutaurwa kuti mwana wega wega akasiyana uye anoda rhythm yavo pakutaura. Kunonoka kutaura kunoitika kana zvichinzi kukura kwemutauro hakuenderane nezera remwana.
Nenzira yakawanda, zvinogona kutaurwa kuti mwana anotanga kutaura mazwi ake okutanga kubva kune rimwe gore rezera. Panosvika mwedzi 18 yezera mucheche anofanira kuva nemashoko anenge 100 mudura remashoko uye pazera remakore maviri mashoko ake anofanira kuwedzera nemashoko anenge mazana matanhatu. Pazera remakore matatu, vanofanira kuita mitsara ine zvinhu zvitatu uye vane mazwi anosvika 3.
Panguva ipi panogona kuva nekunonoka kwemutauro?
Panogona kuva nechinetso chomutauro pazera ramakore maviri haikwanise kuumba mitsara ine mazwi maviri. Pane huwandu hwezviratidzo zvinogona kuratidza kuti pane kunonoka kutaura, kunyanya kana aine makore matatu:
Kutadza kugadzira zvirevo inongotaura manzwi ega.
Iyo haishandisi chero rudzi rwechirevo kana chinongedzo uye sarudza kurerutswa kwephonological.
Haakwanisi kugadzira mitsara ari oga uye izvo zvaanoita ndezvekutevedzera.
Ruzhinji rwevacheche vanotanga kunonoka kutaura, vanowanzogadzirisa mutauro wavo nekufamba kwemakore.
Nzira yekubatsira mwana mukukura kwemutauro
Vabereki vanogona kutanga kuverenga nyaya kuitira kuti mwana ajairane nomutauro zvishoma nezvishoma.
Gadzirira mitsara yakapfava inochinjirwa kuzera remwana uye vashandise zuva nezuva.
Zvakanaka kutumidza mazita nguva dzose zviito zvakasiyana zvinofanira kuitwa.
dzokorora nguva dzose uye kakawanda pazuva mazwi ezuva nezuva senge imba, mubhedha, mvura, nezvimwe.
Tamba mimwe mitambo ine hukama nemwana nemutauro kana kutaura.
Muchidimbu, hapana chikonzero chekunyanya kunetseka pamusoro pekunonoka kwekutaura muvana nevacheche. Mwana mumwe nemumwe anoda rhythm yake uye hazvina kunaka kumuenzanisa nevamwe vadiki. Kana, pasinei nemakore, mwana ane dambudziko rekutaura, ipfungwa yakanaka kuenda kune nyanzvi kuti ibvise chero dambudziko rinogona kukanganisa zvakananga kukura kwemutauro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Vanamai » Vacheche » Ndeipi nguva panogona kuva nekunonoka kutaura muvana?
Kugara mumba mune nyonga nyonga kunokanganisa hutano hwako
Spiced meatballs mumuto ne broccoli uye yogati